Ra’iisul Wasaare Rooble oo ka digay isku day kasta oo lagu marin habaabinaayo Kiiska Ikraan Tahliil. —
Home » Ra’iisul Wasaare Rooble oo ka digay isku day kasta oo lagu marin habaabinaayo Kiiska Ikraan Tahliil.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo ka digay isku day kasta oo lagu marin habaabinaayo Kiiska Ikraan Tahliil.
By radiosomit.com September 14, 2021 No Comments2 Mins Read
Ra’iisul Wasaaraha Xuumadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ka digayaa isku day kasta oo lagu marin habaabinaayo Kiiska Ikraan Tahliil.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaruhu wax uu farayaa Taliyayaasha Ciidamada Qalabka sida in ay ka fogaadaan talaabo kasta oo wax u dhimi karta Sumcadda Ciidamada, dhaawicina karta kalsooni Shacabka Soomaaliyeed .
• Ra’iisui Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxuu aaminsanyahay in Dastuurka Kumeel Gaarka ah ee dalka uu saldhig sharci u yahay kala soocidda Awoodaha Sharci dejinta. Fulinta lyo Garsootka Dalka.
• Ra’iisuł Wasaarahą isagoo maanka ku haya sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka ah ee dałka qodabadiisa 105 lyo 106 oo qeexaaya in Garsoorku ka madax bannaan yahay laamaha Dowladda ee Sharci-dejinta iyo Fulinta marka ay gudanayaan xikooda. waxa uu u xaqiijinayaa Shacabka Soomaallyeed in aan kaalinta uga bannaanayn Hay’adaha Fulita kuna samayn karin wax faragalin ah kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
• Ra’iisul Wasaaraha waxuu la socdaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida ka furan yahay gal dacwadeed ku saabsan kiiska Ikraan Țahliil Faarax taasoo waa faqsan qoddobka 34aad ee Dastuurka ku meelgaarka ah oo xaq u siinaya in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu dacwad sharciga waa faqsan ka furto maxkamadaha awoodda u leh.
• Gal dacwadeed makamada horyaalla in loo magacaabo guddi baaris Waa arrin baal marsan Dastuurka iyo shurcuucda dalka. Saxna maahan in hay’ada xubno ka tirsan oo dacwad loo heysta ay qeyb ka noqdaan baarayaasha kiiska taas oo
Liidid ku ah caddaalada u helidda Qooska kraan Tahalill Faarax Sidaa awgeed.
Ra’iisui Wasaaruhu waxa uu mar kale adkeynayaa in Xeer ilaalinta Maxkamadaha
Ciidamada qaalabka ee gacanta ku haya gal dacwadaeedka kiiska ikraan ay dardar galiyaan si ay qooyskeedu u helaan caddaalad madax bannaan oo ka maran faragalinta hay’daha fulinta.
• Ugo danbeyn. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ka digayaa isku day kasto oo lago marin habaabinayo Kiiska Ikraan Tahliil, sidoo kale Ra’iisul Wasaaruhu waxa uu farayaa Taliyayaasha Ciidamada qalabka Sida in ay ka foqaadaan talaabo kasta oo wax u dhimi karta Sumcadda Ciidamada, dhaawicina karta kalsoonida Shacabka Soomaaliyeed.
October 22, 2021 By radiosomit.com2 Mins Read
Waa kuma dalalka Yurub ee aqbalay in lagu tago Baasaboorka Somalia..?
October 22, 2021 By radiosomit.com1 Min Read
DFS & Turkiga oo ka wada hadlay dbibaatadii ku dhacday Ganacsatada Soomaalida
October 21, 2021 By radiosomit.com1 Min Read